Ajụjụ - Suzhou Judphone-Auspicious Electronic Commerce Co., Ltd.
adreesị:No.101, Ụlọ 15, Loushen Commercial Plaza, Suzhou obodo
FFU na igbe HEPA
Ihe nzacha HEPA
Nzacha ụlọ ọrụ
Ihe nzacha PTFE
Ihe nzacha ULPA
Igwe na-efe efe nwere ọgụgụ isi
Kedu ihe bụ filter HEPA?
HEPA bụ acronym maka High Efficiency Particulate Air, ya mere, HEPA nzacha bụ High Efficiency Particulate Air filter. Ihe nzacha HEPA H14 ga-ejiderịrị 99.995 pasent nke 0.3 microns ma ọ bụ ọbụna ndị pere mpe, dịka Institute of Environmental Science and Technology si kwuo.
Ebu: 3-12 μm
Bacteria: 0.3 ruo 60μm
Mkpọpụta ụgbọ ala: 1-150μm
Oxygen dị ọcha: 0.0005μm
Kedu ka nzacha HEPA si arụ ọrụ?
Na nkenke, HEPA na-enyocha ọnyà mmetọ ikuku n'ime webụ dị mgbagwoju anya nke eriri. Dabere na nha nke irighiri ihe, nke a nwere ike ime n'ụzọ anọ dị iche iche: nkukota inertial, mgbasa, interception ma ọ bụ nyocha.
A na-ejide ihe ndị ka ukwuu site na mmetụta inertial na nyocha. Ụmụ irighiri ihe ndị ahụ na-ejikọta eriri ahụ wee jide ha, ma ọ bụ jide n'aka na-agbalị ịfefe eriri. Ka ụmụ irighiri ihe dị n'etiti na-agafe na nzacha, eriri ndị ahụ na-ejide ha. Ụmụ irighiri ihe ndị dị nta na-agbasa ka ha na-agafe na nzacha, emesịa na-adaba na eriri ahụ wee jide ya.
Ndị na-asachapụ ikuku bụ naanị maka oge COVID-19?
Na mgbakwunye na ịbụ nnukwu enyemaka n'imeso COVID-19, ndị na-asachapụ ikuku nwekwara ike ịga n'ihu na-emeziwanye ikuku ikuku mgbe ntiwapụ COVID-19 gasịrị, na-ebelata nke ukwuu ọnọdụ oyi na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ọ na-enyochakwa ihe ndị na-akpata ihe nfụkasị n'ikuku ma gbochie nsogbu nrịanrịa n'oge oge pollen. Igwe na-asachapụ ikuku nwere ọrụ iru mmiri nwekwara ike ịhazi ma jikwaa iru mmiri, chebe traktị iku ume, ma gbochie ọrịa iku ume nke ikuku kpọrọ nkụ na-ebute.
Gịnị bụ nanocrystals?
Nanocrystals bụ sepiolite, attapulgite na diatomite (diatom apịtị), nke bụ ihe ndị na-adịghị ahụkebe mineral na-abụghị ọla na ọdịdị ma bụrụ ọgaranya pore ịnweta adsorbents. Mgbe nhazi nke ọma nke mineral ndị a, a na-emepụta nanocrystals dị ka ngwaahịa ndị na-eme ka ikuku dị ọcha. N'ime ha, nano-lattice nke sepiolite na attapulgite nwere ike banye formaldehyde, benzene, amonia na ndị ọzọ na-egbu egbu na-emerụ nano-larịị obere molekụla polar bekee na ikuku, mgbe diatomite nwere ike ọ bụghị nanị na-amịkọrọ micron-larịị macromolecular ikuku adịghị, ma na-enye. ọwa mgbasa ozi maka kristal nano-mineral iji meziwanye mmetụta mgbasa ozi nke kristal nano-mineral. Nanometer ịnweta kristal na-asachapụ ikuku nwere atụmatụ atọ: ọsọ mgbasa ozi ngwa ngwa, megharịa, na nzacha mkpụrụ ndụ pola.
Kedu ihe bụ usoro mkpochapụ nke igwe disinfection nke mkpanaka?
Ndị ọrụ na-etinye igwe na-ekpochapụ ihe na mpaghara ahụ ka a kpochapụ ya, ma malite usoro nsị ahụ mgbe emechiri ọnụ ụzọ, windo, ikuku oyi na usoro ikuku ọhụrụ. Robot ahụ na-agba ọsọ na-akpaghị aka wee tinye ọgwụ na-egbu egbu n'ụdị micron akọrọ-fog. Mgbe emechara usoro nsị dị ka ụzọ edoziri na usoro ọgwụgwọ, ikuku kpọrọ nkụ ga-aga n'ihu na-ekpochapụ ikuku maka nkeji 30 ruo 60. Mgbe emechara nje ahụ, mepee ọnụ ụzọ na windo maka ikuku ikuku maka nkeji iri atọ, wee chọpụta ọnụọgụ hydrogen peroxide na ikuku. Mgbe njupụta nke hydrogen peroxide dị ala karịa 1ppm, ndị mmadụ nwere ike ịbanye, ma mechaa disinfection.
Kedu ụdị ọgwụ na-efe efe kwesịrị iji na igwe na-eme ọgwụ mgbochi mmiri akọrọ?
Akụrụngwa na-eji hydrogen peroxide atomized dị ka ihe na-egbu egbu. A na-agbanye ngwọta hydrogen peroxide na ntinye nke 7.5% (W / W) n'ime igwe dị ka mmiri mmiri. Site na atomization, hydrogen peroxide na-anọgide na-efesa n'ime mechiri emechi ohere denatuture na microbial protein na mkpụrụ ndụ ihe nketa ihe na ikuku na n'elu ihe, si otú na-eduga ọnwụ nke microorganisms, na n'ihi ya, ọbọ nzube nke disinfection.
Kedu ụdị ero nwere ike mebie site na igwe?
Staphylococcus albicans, eke ikuku bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis na ndị ọzọ dị iche iche ojii ka atomized ma gbuo.
Ogologo ole ka ọ nwere ike ịgba?
Dayameta ịgba ọgwụ mgbochi nke atomizing nwere ọgụgụ isi robot disinfection karịrị 5 mita, na dayameta injection nke igwe disinfection dị obere karịrị mita atọ. Mmegharị Brown nwere ike kpuchie ime ụlọ a ga-ekpochapụ ngwa ngwa.
Kedu otu esi eji igwe arụ ọrụ?
Enwere ike iji mbadamba ihe ijikwa igwe na-egbu egbu nwere ọgụgụ isi, malite na otu igodo, data ojiji zuru ezu na nke ziri ezi n'oge usoro nsị. Usoro mkpochapụ dị na ọnụ ọgụgụ dị na ya ma enwere ike idekọ/echekwa ya.
Oghere ole ka enwere ike iji ụgwọ mebie ya?
Robot disinfection nwere ọgụgụ isi nke hydrogen peroxide nwere ike ikpochapụ oghere kachasị nke 1500m³ n'otu ụgwọ, igwe disinfection na-ebugharị nwere ike kpochapụ oghere kachasị nke 100m³, igwe disinfection nke vaporization nwere ike kpochapụ oghere kachasị nke 300m³, yana ultraviolet disinfection igwe nwere ike kpochapụ. Oghere kacha nke 350m³.
Robot disinfection nwere ike zere ihe mgbochi?
Ee. Anyị disinfection robot nwere ike nweta onwe-navigation na akpaka disinfection na ojiji nke multiple mgbochi zere sensọ, dị ka laser, ultrasonic, omimi igwefoto, wdg. Ezi n'ọnọdu na kensinammuo mgbochi izere pụrụ ghọtara.
Ogologo oge ole ka akwụkwọ ikike ahụ dị?
Enwere akwụkwọ ikike otu afọ maka igwe dum, na-agụta site na ụbọchị ire ere (a ga-enye akwụkwọ ọnụahịa). Ọ bụrụ na igwe disinfection dị n'ime oge ikike. Enwere ike ịrụzi mmejọ nke ngwaahịa ahụ n'onwe ya kpatara n'efu.
Kedu ihe kpatara anyị ji ahọrọ nzacha nanocrystal?
Ekwentị:+86 512 33060159